Sonos Yakafumura Bhatiri Yekutsiva Kit yeSonos Fambisa | Gadget nhau
Paco L Gutierrez | | Vatauri, Peripherals
Mazuva mashoma apfuura inozivikanwa ruzha brand Sonos yakaratidza chimwe chinhu chakafadza vatengi vayo vese, vamwe Inochinja bhatiri kits yeakasarudzika Sonos Mutauri masipika. Icho kititi chakapusa kuisa uye icho chinobva chagadzirisa ipapo zvingangoita matambudziko ebhatiri atinotakura. Izvi hazviwanzo zvakajairwa maererano neasina kutaura masipika, asi mune iyo Sonos mutengo wayo hauna kujairika futi. Saka avo vanoisa mari yavo vanozokoshesa kugona kuwedzera hupenyu hwechigadzirwa chavo.
Iyi kit inosanganisira zvese zvaunoda kutsiva bhatiri pasina kudikanwa kwemamwe maturusi ekuwedzera, saka chero munhu achakwanisa kuzviita pasina dambudziko. Mupakeji tinowana chimwe chinhu chakafanana chaizvo nekutora gitare kwatinogona kusimudza chifukidziro chekudzivirira, rudzi rweT rwunotibatsira kusunungura masikuru, 2 masipure ekumisikidza uye zvine musoro bhatiri riine huwandu hwakaenzana sepakutanga.
Bhatiri yekuwedzera hupenyu hweSonos Mov yedu
Sonos yakaburitsa ino yekutsiva kit ye ​​€ 79 uye inowanikwa mune iwo iwo mavara iwo avanopa iwo eSonos Fambisa isina waya mutauri. Pawebsite yako zvepamutemo isu tichaona yako yese katalog iyo iyo bhatiri yekutsiva kit yatove yakasungirirwa. Ziva kuti kutumirwa kweiyi yekutsiva kit haina zvachose kubva kuchitoro chayo chepamutemo. Kukosha kwenhau idzi kwakakura, nekuti panga paine vashandisi vazhinji vakati bhatiri vachiona kudzikisira kwakatambura newemukati, chimwe chinhu chinoitika mumidziyo yese, kunyanya mumafoni.
Bhatiri rine zvakatemwa zvakafanana neiyo yekutanga, ine kuzvitonga kwemaawa gumi nerimwe kunozotsamira zvakanyanya pavhoriyamu, tembiricha kana chinhambwe kuchinhu chinoburitsa, pasina mubvunzo huru nhau. Kana iwe uchida kuona kwedu kwakadzama kuongororwa kweSonos Mov, tinya pane iyi link, kwatakaiyedza zvakakwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Makomputa » Peripherals » Sonos yakafumura bhatiri kutsiva kit kune Sonos Mov